Hazard oo ku kaftamay taariikhda PSG, kahor kulanka habeen danbe ay ku wada ciyaari doonaan garoonka Bernabeu – Gool FM
(Madrid) 25 Nof 2019. Xiddiga reer Belgian iyo kooxda Real Madrid ee Eden Hazard ayaa qaab kaftan ah wuxuu hoos ugu dhigay taariikhda naadiga Paris St Germain.
Hadalka Eden Hazard ayaa wuxuu imaanayaa kahor kulanka soo aadan ay kooxaha Real Madrid iyo PSG kuwada ciyaari doonaan habeen dambe ee Talaadada ah garoonka Santiago Bernabeu, kaasoo ka tirsan kulamada 5-aad wareega group-yada ee tartanka Champions League.
Real Madrid ayaa guuldarro xanuun badan kala kulantay kulankii lugta hore kooxda Paris St Germain, kaasoo ka dhacay garoonka Parc des Princes, waxaana loogu awood sheegtay 3-0, xilli uu kulankaas qeyb ka ahaa Eden Hazard.
Si kastaba ha noqotee, kooxda reer Spain ee Real Madrid ayaa waxay dooneysaa in kulanka habeen dambe ay si xoogan ugu dagaalanto garoonkeeda Santiago Bernabeu, si ay saddexda dhibcood kaga qaadato naadiga Paris St Germain.
Hazard ayaa ku kaftamay in Paris St Germain ay awoodi weysay inay ku guuleysato koobka Champions League tan iyo markii la aas-aasay, xilli uu tilmaamay in kooxdiisa Real Madrid ay dooneyso inay ku guuleysato markii 14-aad.
Wargeyska “AS” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Eden Hazard kahor kulanka habeen dambe ka dhici doono garoonka Santiago Bernabeu wuxuuna yiri:
“Paris Saint-Germain waxay aheyd koox xoog leh sanadihii ugu dambeeyay, inkasta oo aanan waligey horey ula ciyaarin iyaga, laakiin waxay u muuqataa inay ka mid tahay musharaxiinta ku guuleysan karta koobka Champions League aniga ahaan”.
“Waxaan dooneynaa inaan ku guuleysano koobkii 14aad ka hor inta aysan PSG ku guuleysan koobkoodii ugu horreeyay, waxay sanado badan sheegayeen inay ku guuleysan doonaan, waxaan rajeynayaa inay ii sheegi doonaan goorta ay ku guuleysan doonaan, sababtoo ah waxaan doonayaa inaan ku guuleysto dhamaan tartamada kale”.